Ny Mpitarika ny Famoronana Dia Tsy misy ny Asa ny Mpisolovava
Mino ny ankamaroan’ny olona fa mila manao ny tolotra ny mpisolovava iray mba hanangana ny dia, fa ny zava-misy dia na inona na inona, dia bebe kokoa ny fahamarinana. Marina izany fa raha toa ianao manana lehibe, ambony dolara ny sandan’ny fananana, angamba ianao te-hanao ny mpahay lalàna, satria handevonana ny lafin-javatra hafa dia mety ho sarotra any amin’ireo toe-javatra. Ianao koa azo antoka fa te-hampiasa ny ny mpisolovava ny fahaizany raha toa ka mila mametraka ny Fitokisana ho an’ny iray na maromaro amin’ny mpikambana ao amin ny fianakaviana, fa ny marina, ireo toe-javatra mihatra latsaky ny ny mponina. Ao ny hafa rehetra toe-javatra, dia afaka mamorona ny ara-dalàna manan-kery Farany Dia sy ny Testamenta tenanao, tsy misy mpahay lalàna ilaina. Ireto ny zavatra tokony ho fantatra mba hahafahana manao hoe: Ny zavatra faharoa dia ny dia tsy maintsy ho fantatra fa toy izany. Afaka hanatanteraka izany fotsiny amin’ny entitling ny tahirin-kevitra»Farany Dia sy ny Testamenta,»sy izay zava-dehibe, noho izany dia somary mora mba hihaona fitakiana izany. Ho toy ny lafiny mahafinaritra-taratasy, raha toa ka efa mba nanontany tena hoe nahoana legalese mazàna ampiasaina kokoa noho ny teny ilaina («farany dia sy ny testamenta»,»atsaharo sy desist», sns.), ity ny antony: Indray amin’ny andro voalohany ny amin’ny asa, mpisolovava ampiasaina mba hahazoana vola araka ny teny.
Rehefa nandeha ny fotoana, dia teny foana. Manamarika, na izany aza, fa ny firenena vitsy mbola manaiky ny tanana voasoratra. Handeha ianao mba te ho karazana izany eo amin’ny solosaina sy printy izany. Manaraka, tokony hanomboka amin’ny filazana ny anarana ofisialy ny firaketana an-tsoratra. Ny fanamarihana manan-danja eto dia ny hoe amin’ny faran’ny antontan-taratasy, ianao no mila manampy sonia ny anarany sy ny daty izany, ka ho azo antoka fa mampiasa ny feno ara-dalàna ny anarana eto, sy ny nanao sonia tsipika. Ohatra, raha toa ka feno ny anarany dia i Christopher, fa ny olon-drehetra foana miantso anao Chris ho fohy ianao, dia mila momba ny tenanao amin’ny alalan’ny feno, fomba ofisialy ny anarany. Rehefa manao izany ianao, dia ianao koa te handeha anarany ny vadiny, ary ny ankizy rehetra dia manana izay miaina amin’izao fotoana izao. Raha toa ka ny ankizy tsy ampy taona dia mila mikarakara, eto ny toerana ianao hanendry olona ho toy ny mpiambina ho azy ireo izy ireo mandra-ara-dalàna ny taona. Mety te-hanendry iray na roa fanampiny ny olona ho toy ny mpisolo mpiambina fotsiny mba handrakotra ireo toby eto. Misy dia misy dikany raha tsy misy actionable toromarika momba ny toetrany. Izany dia midika fa handeha ianao mba hamantarana ny lafin-javatra hafa manan-danja, ary ny anarany tombontsoa ho azy ireo. Ny nahazo ny sitrapony fotsiny ny ny olona ianao ny anarany izany izay mahazo ny zavatra, na inona izany na inona. Eto, ianao afaka mahazo araka ny antsipirihany araka izay tianao. Ny olona sasany hanaraka fotsiny ny lehibe fananana (izay mahazo an-trano, ny sambo, fiara, sns.), fa raha te-hanonona manokana ny tombontsoa ho ny toerana tena echec birao, dia afaka tena hanao izany. Ankoatra ny divvying ny fananana na inona na inona ianao manokana, ianao atao koa ny hamela ny toromarika manokana momba ny farany ny fandaharana. Ve ianao te-ho nalevina na nodorana? Eto no toerana azonao ambara. Raha te-ho nalevina tao manokana fasana, indray, dia afaka manokana araka izay irinao. Ianao koa angamba te-ho lazaina intsony ny zava-misy izay tsy manome ny fankatoavana noho ny executor mba handoavana ny fandaniana farany avy amin’ny dobo ny fananany, alohan’ny fizarana ny fananana natao. Izany dia hitandrina ny olona avy scrambling vao hahalala ny fomba handoavana handevina na cremate ianao. Raha vao ianao efa nandamina ny rehetra ireo antsipiriany, eo amin’ny farany ambany ny antontan-taratasy, ianao sonia ny anarany eo anatrehan’ny vavolombelona roa ireo, ary daty ny tahirin-kevitra. Koa ny lisitry ny amin’izao fotoana izao ny adiresy. Mariho fa ny vavolombelona dia tsy maintsy ihany koa ho amin’ny kely indrindra ny valo ambin’ny folo taona ny taona, ary tsy afaka ny ho tombontsoa izay efa nandao ny fananany. Amin’ny teny hafa, ny vavolombelona dia tsy afaka manana ny tsatòka ao an-dia rehetra. Toy ny nanampy ny dingana, dia mety maniry ny hanao izany rehetra izany eo anoloan’ny notary, ary manana ny tahirin-panjakàna, fa tsy izany no ilaina. Ny dingana fanampiny mety hamonjy ny Executor-potoana sy ny olana ao amin’ny hetsika fa ny sitraponao no nanohitra tamin’ny olona iray, noho izany dia tsara tsy an-katerena ny dingana mba ahitana raha mieritreritra zavatra tahaka izay no mety hitranga. Raha vao ny tahirin-kevitra dia nanao sonia, ianao te-hitandrina azy eo amin’ny toerana azo antoka. Ny fireproof soa aman-tsara ny asa, izay tsy dia izay rehetra manan-danja hafa ny antontan-taratasy tokony ho mitoetra. Ny anton’izany dia ny hoe afa-tsy ny tany am-boalohany dika mitovy hanompo. Ny dika mitovy iray dia tsy azo ampiharina.
Ary izany no izy
Fa ny tena zava-misy izany. Mety ho nihevitra fa izany dia sarotra kokoa. Misy marina aloha fa kely ny mystique manodidina ny dingana, fa enga anie, izao ianao mamaky ity fohy mpitari-dalana, dia nanala ny misy hevi-diso momba ny dingana mety nanana. Tena tsy efa ho sarotra toy ny olona manao azy ho avy. Iray fanamarihana farany eto, dia ny hoe afaka ny vaovao farany na manao fanovana ny dia amin’ny fotoana rehetra. Manoratra fotsiny ny nohavaozina iray, manaraka ny dingana voalaza etsy ambony, ary fiovana izany rehefa tsy tiany ianao, na rehefa ny fiainana fiovana amin ny fomba vaovao farany dia warranted. Nat no Mpanorina sy Mpamoaka lahatsoratra ao amin’ny Lehiben’ny Uncoached Orinasa sy ny fananana. Ny andraikitra voalohany dia ny fitantanana ny matoan-dahatsorany, fampandrosoana ny raharaham-barotra, afa-po ny fampandrosoana, an-tserasera acquisitions, ary ny asa. Uncoached nanomboka ny taona amin’ny toerana iray, ary ny tanjona dia ny famoronana votoaty izay mazava, voafintina, ny famakian-teny, ny voly, sy ny mahasoa. Nanomboka tamin’izay ny portfolio-nitombo fananana fandrakofana maro isan-karazany verticals anisan’izany ny raharaham-barotra, ny fitantanam-bola manokana, real estate, maritrano, televiziona, sarimihetsika, fialam-boly, lalao video, ny fomba fiainana, ny biby fiompy, sy ny maro hafa
MAIMAIM-POANA NY MPISOLOVAVA AN-TSERASERA HO MAIMAIM-POANA TSY AN-TARIBY